‘हिन्दुधर्म नेपालीहरूको मौलिक पहिचान हैन, हिन्दु भन्ने बित्तिकै विदेशमा हिन्दुस्तानी सोँच्छन्’ - Naya Online
Sunday 11th , April 2021
‘हिन्दुधर्म नेपालीहरूको मौलिक पहिचान हैन, हिन्दु भन्ने बित्तिकै विदेशमा हिन्दुस्तानी सोँच्छन्’
मङ्लबार, फाल्गुन १८, २०७७ (March 2nd, 2021 at 12:26am ) प्रवास, ब्लग
भगवान चाम्लिङ राई
कुवामा बसेर संसार परिवर्तन देख्न नसकेका प्लमस्ट्रिट यूकेस्थित कथित पशुपतिनाथका मूल पण्डित निलहरि घिमिरेले बेलायतमा आसन्न राष्ट्रिय जनगणनामा सबै नेपालीहरूलाई धर्मको नाममा हिन्दू लेख्नु भनेर सबैतिर सुझाव दिएर पठाएछन् ।
निलहरि जी ! तपाई पण्डितको निर्देशनमा समाज चल्ने परम्पराको अन्त भयो भन्ने कुरा बुझ्नुस् । यूग र परिवर्तनलाई बुझेर हिडन सिक्नुस् । परिवर्तन आफैमा केवल शब्द मात्र हैन त्यासलाई व्यावहारमा रूपान्तरित गरेर हेर्नुस् । अनिमात्र परिवर्तनको शाब्दिक अर्थ बुझ्नुहुनेछ । म त भन्छु बेलायतमा बस्नुहुने सबै नेपालीहरूले, पहिला किरात धर्म रोज्नुहोस् र बुद्ध धर्म, अनि केहि हिन्दुवादीहरूले चाहनुहुन्छ भने हिन्दु पनि लेख्दा तपाईहरूको सोइच्छा हो । तर बेलायतमा विशेषतः किरात धर्मलम्वीहरू र बुद्ध धर्मलम्बी नेपालीहरू नै अत्यधिक भएको हुनाले किरात धर्म र बुद्ध धर्म लेख्नुमा नै सारा हामी नेपालीहरूको उचित पहिचान र सम्मान हुनेछ । नेपालको इतिहासले के प्रष्ट्याएको छ भने किरातहरू भनेको राई, लिम्बु, सुनुवार मात्र हैन । मगरहरू, थारूहरू, गुरूङ, नेवारहरू, धिमाल, बनकरिया, चेपाङ, राईदनुवार आदि सबै हुन् । तर भारतबाट आयतित हिन्दु धर्मलाई स्थापित गर्ने नाम्मा यहाँका नेपालका रैथाने मौलिक धर्म र भाषाहरूलाई विस्थापित गर्न शासकहरूले अनिवार्य ठाने । तिनै सिद्धान्त र षडयन्त्रगत नीति अनुरूप स्थानीय आदिवासी÷मुलबासीहरूको पहिचनका आधारहरूमाथी क्रमशः सुनियोजित ढङ्गबाट प्रहार गर्दै लगियो । अन्तत्वगत्व आदिवासी÷मुलवासीहरूको संस्कार, संस्कृति, चाडबाडहरूलाई देशको प्राथमिकताबाट हटाईयो र आयतीत चाडबाड संस्कार संस्कृतिहरूलाई प्रथमिकताभित्र राख्ने कार्य राज्यशक्तिले गरे । यस्लेगर्दा आदिवासी÷मुलवासी जातिहरू आफ्नै मौलिक माटोमा अन्योल, अज्ञान र अन्याय सहँदै, खप्दै आएको वास्तविक्ता हो ।
नसुनेको भाषा, नदेखेको अक्षेर नसुनेको नभोगेको नीतिनियम पालना गर्न बाध्य बनाईयो । उनको भाषा त लादे–लादे, भाषा लादेर पनि त्यो भाषा सिक्ने र जान्ने बुझ्ने हुने अधिकारबाट बन्चित गराए । पढ्नेलाई जिब्रो काटिदिने, सिक्नेलाई हात काटिदिने अमानविय व्यवहार, आचरण, नीतिनियम बसाले । र, त्यस्को निरन्तरता यो वा त्योकारण देखाएर अध्यवधि कुनै न कुनै रूपमा कÞायम राख्न जोडजफ्ती चाहिरहेको हामीले स्पष्ट अनुभूत गर्न पाईन्छ । हिन्दुधर्म आफैमा अलोकतान्त्रिक छ, अप्रजातान्त्रिक छ । प्रजातन्त्रको विरूद्धमा छ, मानवअधिकारको विरूद्धमा छ । मानवलाई मानवीयरूपमा चिन्न र मानवीयरूपमा व्यवहार नगर्न निर्देशित गर्छ सिकाउने कार्य गर्छ । त्यसैले यो सामाजिक रूपान्तरणको विरूद्धमा पनि छ । अप्रगतिशील छ, अवैज्ञानिक र अमानवीय व्यवहारले भरिएको छ । त्यतिमात्र हैन हिन्दुधर्म आफैमा स्वार्थको पराकाष्ट पनि छ । फाईदाका लागि मान्छेको अस्तु वा मासु खाने धर्म पनि हिन्दु धर्मभित्रकै संस्कार हो । त्यसो हुनाले आजको २१सौँ शताब्दिमा हिन्दुधर्म कुनै पनि अर्थमा अनुकरणिय छैन र नेपाली आदिवासीहरूले हिन्दुधर्म अवलम्वन गर्नु विल्कुल असम्भव छ । अपरिकल्पनिय छ भन्छु म त । बरू हिन्दुधर्मावलम्बिहरूले समय सापेक्ष्य आजको वैज्ञानिक दुनियामा परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।
आज बेलायतमा नेपालीहरूले हिन्दुधर्म लेखेता पनि भारतीय हिन्दुस्तानबाट आएका रहेछन् भनेर नै बुझ्नेछन् वा हिन्दस्तानीहरू भनेर नै बुझ्नेछन् । त्यसैले पनि हामीले हामी सबै नेपालीहरूले किरात धर्म वा बुद्धधर्म लेख्न अनिवार्य अपरिहार्य देखिन्छ । नेपालमा किराती शिवलाई हिन्दुहरूले धार्मिक अतिक्रमण गरेर हिन्दु देवता भनिरहेका छन् किराती शिवजीलाई । तिनलाई नै हिन्दुहरूले किरात शिवधर्म भनेर लेख्दा पनि । भरतीय हो कि भन्ने आशंकाबाट त जोगिन सकिन्छ नी । कारण हिन्दुधर्म असली नेपालीहरूको पहिचान हुँदै हैन । प्रथमतः यो भारतीय हिन्दुस्तानीहरूको पहिचान हो । कहाँ नेपालीहरूको पहिचान हो त ?
अबका दिनहरूमा नेपालका आदिवासी भाषिकहरूले आफ्नो भाषाका नाम राखौँ । जस्तो चाइनिजहरूले उस्को नाम भन्न बितिकै चाईनिज रहेछ भन्ने बुझिन्छ । अङ्ग्रेजहरूले उस्को नाम भन्न वितिकै इङ्लिस रहेछ भन्ने बुझिन्छ । अधिकांस देशहरूको त्यसरी छुट्टिने गर्छ । तर हामीले हाम्रो नाम भन्यो भने ‘आर यू फ्रम हिन्दुस्तान÷इन्डीया’ भनिदिन्छ । विषेश गरेर बेलायतमा बस्दा नेपालमा जस्तो सबै काम अफिस–अफिस धाउने प्रचलन छैन फोन र इमेलबाट सबै काम हुन्छ । त्यसैले फोनमा बोलेर नाम भन्योकी ‘आर यू फ्रम ईन्डीया’ भनिदिन्छ त्यसैले आफ्नो पहिचान बचाउनु आफ्नो मौलिक भाषामा नाम राख्ने कार्यलाई प्रथमिकता दिने गरौँ । अन्त्यमा म भन्छु आवाज निकाल आवाजविहिनहरू हो । घरभित्र ठूलठूलो आवाजले झगडा गरेर बाहिर थरथरभएर बाँच्नुले खासै बाँचेको अर्थ राख्दैन ।
लेखक, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवास विशेष प्रदेश सहइन्चार्ज हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजको मलेसिया समिति गठन
क्वालालम्पुर, ६ अप्रिल । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजको मलेसिया राष्ट्रिय कार्यसमिति घोषणा भएको छ ।...
जसपाको प्रदेश समिति विस्तार
नेपाली समाजहरूलाई चलायमान बनाउने लन्डन(यूके), १ मार्च । जनता समाजवादी पार्टीको प्रवास विशेष प्रदेश...
इतर आवाज साहित्य समाजद्वारा बधाई ज्ञापन
सोमवार, चैत्र १६, २०७७
काठमाडौँ, १६ चैत । इतर आवाज साहित्य समाज, दक्षिण कोरियाले बधाई ज्ञापन कार्यक्रम आयोजना...
‘खैयामलाई प्रश्न’काे विमोचन
भक्तपुर, १५ चैत । रुबाई विधाको कृति ‘खैयामलाई प्रश्न’ विमोचन भएको छ । क्रिएटिभ...
विनेसाम साउथ यूकेले स्थापना दिवसमा इको गीत वाचन कार्यक्रम गर्दै
आसफोर्ड(केन्ट), २६ मार्च । विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ, साउथ यूकेले आफ्नो स्थापना दिवस र...
मलेसियामा प्रवासी नेपाली मञ्च व्युँतियो
सोमवार, चैत्र ९, २०७७
जेडी गाउँले क्वालालम्पुर, ९ चैत । नेकपा एमाले पार्टीको प्रवास शाखा प्रवासी नेपाली मञ्च...
भगवान चाम्लिङ राई कुवामा बसेर संसार परिवर्तन देख्न नसकेका प्लमस्ट्रिट यूकेस्थित कथित पशुपतिनाथका मूल...
पराजित पोमुको संयोजकत्वमा आदिबासी जनजाती महासंघ दक्षिण कोरियाको गठन
द.कोरिया, ११ फागुन। २०७७ का दिन काठमाडौमा लेखक राजन मुकारुङ्गको नेतृत्वमा बनेको आदिबासी जनजाती...
कवि पराजित पोमुको संयोजकत्वमा जनजाति साहित्यकार महासंघ कोरिया गठन
प्रकाश दिप्साली राई, नडाहा । नेपाल आदिवासी जनजाती साहित्यकार महासंघको अन्तराष्ट्रिय समिति “नेपाल आदिवासी...
मौलिक स्थानहरूको नाम परिवर्तनले आदिवासी पहिचान सङ्कटमा
लन्डन, १९ फेब्रुअरी । आदिवासी समुदायको थातथलो र सभ्यतासँग गाँसिएका स्थलहरूको नाम अप्रभंश हुने...
सुनसरीमा साईकल चोरी गर्ने एक जना पक्राउ
बिर्तामोडमा मोटरसाईकल दुर्घटनाबाट १ जनाको मृत्यु
लागूऔषध ब्राउन सुगर सहित एक जना पक्राउ
इटहरीमा ट्रिफरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
विवेक र रचनाको स्वरमा ‘बैना’ सार्वजनीक (भिडियो)
नोवेलले ग-यो मास्टर एण्ड मिस नोवेल सिजन–४
जातीय दुव्र्यवहार गर्दै निर्घात कुटपिट गर्दा एक दलितको मृत्यु